Fomban-drazana Shileana Tsy Hay Hazavaina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Septambra 2017 4:52 GMT
(Marihina fa tamin'ny 5 aprily 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Ity no andro voalohany ho anao ao amin'ny anjerimanontolo. Tsapanao any anatinao any ny fanantenana rehetra. Mahatsiaro ho mirehareha amin'ny maha-anao anao ianao satria nandalo fanadinam-pirenena, izay manome anao ny ilaina hidirana oniversite. Vaovao avokoa ny zava-drehetra : ny endrika, ny toerana, ny fifampiresahana, ny fofona, ary ny olona.
Tampoka eo, mifetaka eny amin'ny tarehinao ny atody. Tongasoa eto amin'ny oniversite !!! Miova ho azy ho “mechón” (midika hoe mihidy, saingy ny dikanteniny dia hoe taona voalohany”) ny satanao. Isaky ny volana Martsa sy Aprily, rehefa miditra ny oniversite ireo mpianatra vaovao, dia manolotra azy ireo ny fiarahabana antsoina hoe “mechoneo” ireo kilasy ambony. Tsy fantatra ny datin'ny mechoneo ary indraindray mifantoka amin'ny fanaovana ireo mpianatra hisedra toe-javatra mahamenatra.
Ao amin'ny “Fidio ny Lahatrao” (ES) dia misy lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe “mechoneo lafo vidy” izay manondro ireo mpianatra nahazo diplaoma ary midaroka ny mpianatra telo vaovao ao amin'ny fetin'ny mechoneo. Mifarana amin'ny fahavakisana orona izany. Miezaka ny hampitsahatra ity fomba fanao ity ny oniversite, kanefa matetika ny olona sasany mangataka izany. Nanoratra i “Funkshop” (ES) mpianatra iray hoe “nifoha aho androany niaraka tamin'ny tanjona tokana : mba ho mechoneado. Nahoana àry no 28 Martsa anio ary tsy mbola voan'izy ireo izahay? Tahaka ny hoe adinon'izy ireo izahay “. Etsy ankilany, hoy i Marcelo nanoratra hoe, ” nanomboka ny hetsika fialamboly omaly tamin'ny 5 ora niaraka tamin'ny fanohanan'ny Fikambanan'ny Mpianatra. Takatry ny mpianatray ny hafatra; kanefa ny famongorana ny herisetra sy ny fanalam-baraka ho fanombohana ny fiainana ao amin'ny anjerimanontolo … dia fivoarana ilaina. “